Aljebra waa eray asal ahaan carabi ah. Macnaha eraygan waa ”dib u mideyn” ama ” isku xire”, marmar ayaa si aan habooneyn loo yiraahdaa xisaab xuruufeed. Waayo aljebrada waxaa tirooyinka bedelkooda la isticmaalaa xarfo (xuruuf).
Aljebra ama isla'egyada aljebrada ayaa waxaa la adeegsadaa marka la raadinayo in la xaliyo masalooyin kala duwan ee xisaabta. Masalooyinka aljebra waxay yeelan karaan qaaciddo ama xeerar la raaco.
Waxaa dhacda marar badan annagoo ku talagelin inaan adeegsano xisaabta aljebrada. Tusaale ahaan marka la dhisayo wado, guri, diyaarad, ama dhinaca kale marka la cabiraayo xawaaraha uu shey sida baabuur ku socdo ayaa la adeegsadaa aljebrada.
Waxaa laga yaabaa inaad mar mar is weydiisid sidee ayaa si sax ah loo cabiraa xawaare, fogaan iyo aminta (waqtiga)? Waxaa muhiim ah inaan ogaano in la isticmaalo qaaciddo aljebreed taasoo na siinaysa fogaanta u dhaxeysa labo magaalo tusaale ahaan magaalada Stockholm iyo New York, marka aan naqaano xawaaraha diyaaradda ay ku orodo iyo waqtiga ay ku qaadaneyso inay halkaas tagto.
Qaaciddada waxay noqonaysaa sidan:
xawaare = h
aminta (waqtiga) = t
Caadiyan qaaciddada sidan ayaa loo qoraa